Hubka Eebbe: 6 Qaybood Ayaa La Sharaxay oo Macnihiisu Yahay?
Ma ogtahay Hubkii Eebbe?
Dagaal ahaan, halkaasoo askarigu ugu baahan yihiin hub gaar ah sida jaakado bir-aan laga difaaci karin, koofiyado si ay u difaacaan madaxooda, hubkooda iyo aalado kale.
En dunida ruuxi ahaaneed, waxaan sidoo kale u baahanahay hub na ilaaliya oo naga caawiya inaan wajahno dhammaan dhibaatooyinka ka soo bixi kara nolosha.
Erayga Ilaah, gaar ahaan cutubka ugu dambeeya ee Efesos, mid ka mid ah waraaqaha uu Rasuul Bawlos qoray, wuxuu kula talinayaa dhammaan rumaystayaasha inay adeegsadaan hubka Ilaah si ay ula dagaallamaan kan sharka ah oo ay u guuleystaan ​​guusha.
Dunida ruuxiga ahi waxay ku jirtaa dagaal joogto ah waana sababtaas awgeed waa inaan had iyo jeer diyaar u nahay.
1 Qaybo ka mid ah Jidka Eebbe
1.1 1: Suunka runta
1.2 2: laabashada cadaalada.
1.3 3: Diyaarinta injiilka
1.4 4: Gaashaanka iimaanka ee hubka Ilaah
1.5 5: Koofiyadda badbaadada ee ku jirta hubka XNUMXaad ee hubka
1.6 6: Seefta Ruuxa oo ku jirta Gacanta Ilaah
Qaybo ka mid ah Jidka Eebbe
Hubkan waxaa ku jira aalado taxane ah oo qalab diimeed ah, si aad u ogaato sida loo adeegsado, waa inaad ogaataa sida loo istcimaalo taasina waa sababta aan hadda kuu sheegayno waxkasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad naftaada ugu difaacdo hubka ruuxiga ah.
1: Suunka runta
Suunka runta ayaa lagu magacaabay Efesos 6:14. Jir ahaan iyo wakhtiyadii horeba, askartu waxay xidhnaayeen suun si ay u sii hayaan dharka dharka halka ay jidhka ka taageerayaan.
Maskaxda ruuxiga ah, suunka wuxuu noqdaa aqoontaas iyo xasilloonida inaga dhigeysa inaan si adag u taagnaano, kuna qancino inaan nahay wiilasha ilaah, in kasta oo kan sharka ahi uu doonayo inuu nagu qanciyo haddii kale.
Si aan si sax ah ugu adeegsanno suumanka runta ah qalbiyadeenna waa inay ku buuxsamnaataa ereyga Rabbiga waa inaan nafteenna ku xoojinnaa baryada. Waa inaan ku noolaano nolol buuxda oo adag sida jidka Masiix.
2: laabashada cadaalada.
Sidii waayihii hore waxaa jiray qolof, kaas oo ay ku dabooleen xubnaha gudaha, sida aan hada u naqaano jaakada-dabka.
Askarta ku socota adduunka ruuxiga ah waxay u baahan yihiin inay qalbigeenna ka ilaaliyaan dhamaan weerarada cadowga.
Shaashadda caddaaladda waxay noqotaa daboolkaas na siinaya cadaalada inaynu ku gaadhno Ciise iyo allabarigii uu noo sameeyay waa iskutallaabta Calvary.
Si aan si sax ah ugu adeegsano waa inaan xasuusano aqoonsiga aan ku leenahay Masiixa, garowno mahadnaqa allabaritiisa in aan xaq ku leheyn aabaha jannada ka hor
Ma rumaysan karno waxa cadowgu noo sheego ama eedeymahayaga ama aan xasuusano nolosheena hore ama dembiyadeena.
Kuwani waa xeeladaha shaydaanka in ay na waxyeelleeyaan oo kaliya galka cadaaladda ee na ilaaliya weeraradan.
3: Diyaarinta injiilka
Dagaalyahan kastaa wuxuu u baahan yahay inuu cagihiisa ka ilaaliyo weerarada maxaa yeelay kuwan waliba waa bartilmaameed muhiim u ah cadowga.
Haddii askarigu uusan ku adkeynayn socodkiisa markaa way fududahay in la baabi'iyo. Askartu waa inay qaadaan talaabooyin adag oo amaan ah, ayadoon lagala tashan ama cabsi gelin.
Kabaha injiilka waa inay xiraan si nabdoon, aaminaan wixii Eebbe ku siiyay, xoog ku adkee wadada.
Naftaada ku buuxi nabad, farxad iyo jacayl oo u oggolow tan inay ku sii faafto kuwa kugu dhow. Baaqu waa in lagu wacdiyo injiilka wax kasta oo uunka ah.
Iyada oo leh talaabooyin nabdoon markasta oo aad daawatid inaadan ku dul socon wax miinada ah ama shay kasta oo fiiqan oo cadowgu wadada kaga tagi karo. Had iyo jeer hore u soco oo marna ha ku kicin, kuna sii kordha boqortooyada Ilaah.
4: Gaashaanka iimaanka ee hubka Ilaah
Halkan Rasuul Bawlos wuxuu inaga tagayaa tilmaamaha loogu talagalay gaasha iimaanka. Waan ognahay in gaashaarku yahay difaac ilaalin kara oo inaga caawin kara dagaalka sidaa daraadeedna midkoodna weeraradu ma soo gaadhin.
Adduunyada ruuxiga ah waxaan sidoo kale u baahan nahay gaashaandhig maxaa yeelay cadowgu wuxuu ku tuuraa hambalyo, haddii ay ina soo gaarto, wax badan ayey na dhaawici karaan.
Gaashaanka iimaanku si sax ah ayaa loo adeegsadaa marka iimaankeenna la xoojiyo. Tan darteed waa inaanu akhrinaa ereyga Ilaah, waa inaanu xasuusnaa oo, ugu muhiimsanna, ku dhaqan gelinnaa.
Aynu xasuusano in iimaanku yahay muruq ah haddii aan la istcimaalayn markaa atrophies, aan adkeyno iimaan oo aan adkeyno si ay inaga badbaadiso dhammaan weerarada uu sharku nagu soo qaado.
5: Koofiyadda badbaadada ee ku jirta hubka XNUMXaad ee hubka
Koofiyaduhu waa koofiyad ilaaliya askariga madaxa. Mid ka mid ah gogo 'ugu muhiimsan ee hubka oo dhan.
Maskaxdeenu waa goob dagaal dhab ah waana bartilmaamed sahlan cadowga maxaa yeelay waxay si toos ah u weerartaa fikradaheena taasoo naga dhigaysa wax aan fiicneyn ama naga dhigaysa inaan aamino waxyaabo aan sax aheyn sida ku qoran ereyga Rabbiga.
Waxaan u adeegsanaa koofiyadda ama koofiyadda badbaadada markii aan xasuusano waqti kasta oo aan ku badbaadino rumaysad taasina waa run aan la beddeli karin.
Waa inaan la dirirnaa oo aan kula dagaallano fikradaha xunxun erayga Eebbe maxaa yeelay isagu wuu jecel yahay oo naga cafiyey dembiyadeenna oo dhan.
6: Seefta Ruuxa oo ku jirta Gacanta Ilaah
Halkan waxaa jira farqi weyn maxaa yeelay hubka kale waa inuu na ilaaliyaa laakiin tan waa mid khaas ah maxaa yeelay waxaa loo sameeyay si aan u weerareyno xoogagga sharka. Seefta waxaan ku dhaawici karnaa oo aan ku dili karnaa cadowga markasta oo aan rabno inaan qaabkeenna ku soo galno.
Taas ayaan ku difaaci karnaa oo aan u iftiimi karnaa habka aan u safreyno, oo aan hubsanno inay awood badan tahay iyo in, haddii aan naqaanno sida loo isticmaalo, waxaan heli doonnaa guul.
Si loo isticmaalo seefta Ruuxa Quduuska ah waa inaan ka buuxsanno ereyga Ilaah maxaa yeelay seefta way shaqeyneysaa markaan eraygiisa hadalno. Waa muhiim in awood loo adeegsado si wax ku ool ah xaalad kasta iyo markaan ka dhigno mid waxtar u leh nolosheena.
Xusuusnow in Kitaabka Quduuska ahi uu la mid yahay tilmaamaha nolosha oo ay ereyadanu leeyihiin awood ay tahay inaan ku fulinno waxyaabaha halkaas lagu tilmaamay.
Dhammaan hubka ruuxiisu wuxuu ku shaqeeyaa caqiidadiisa oo waa lagu xoojiyaa dhexdeeda salaadda.
Markii aan sii aqriyo ereygiisa, waxaa sii badanaya iimaanka aan lahaan doonno oo waxaan awood u yeelan doonnaa in aan si wanaagsan u adeegsanno hubka. Tukashadu waa furaha wax kasta, wadaagista Ruuxa Quduuska ah ayaa noo horseedi doonta inaan ugu noolaano si waafaqsan rabitaanka aabaha jannada.